HORDHAC: Manchester City VS Schalke 04 ? City oo dooneysa in ay xaqiijisato booskeeda wareega xiga ee sideed dhamaadka ee Champios League . – Gool FM
( Champions League ) 12 MARSO 2019 kooxda Man City oo ku naalooneysa hogaanka horyaalka Premier League ayaa markan garoonkeeda ku soo dhaween doonta kooxda Schalke 04 kulanka lugta labaad ee wareega 16-ka tartanka Champions League .
City ayaa guul hor dhac ku soo gaartay ciida Germany waxaa kale oo ka saacidi kara in ay u soo baxaan wareega xiga in ay soo dhaliyeen goolal badan oo bananka ah kulankii hore .
City waxa ay rajeeneysaa in snadkan meel wanaagsan ay ka garaan tartanka Champions League iyada oo la xasuusto in sanadkii hore ay ku hareen wareega afar dhamaadka ,Liverpool ayaana ku reebtay .
Wararka Labada kooxda ee ka hor ciyaarta:
Nicolas Otamendi iyo Fernandinho ayaa dhaawac kaga maqan kooxda garoonkeeda lagu ciyaarayao waxaa kale oo shaki ku jira joog dheeraha reer Englad ee John Stones oo laga deerinayo caafimaadkiisa .
Vincent Kompany oo ah kabtanka kooxda ayaa ka soo muuqan kara kulanka isaga oona ka garb ciyaari doono Aymeric Laporte oo dhaawac ka soo laabtay ahna midka ugu muhiimsan ee wadnaha daafaca dhexe ee kooxda City waqti xaadirkan .
Claudio Bravo ayaa dib ula bilaabay kooxda tawa barka kaddib dhaawac uu ka soo noqoday balse wax dooq ah kuma lahan kulankan halka xidigaha kala ah Kevin De Bruyne iyo Sergio Aguero la hubin doono xaaladoodaa caafimaad ka hor kulanka .
Gabriel Jesus iyo Leroy Sane oo aan ku soo bilaban kulankii guusha ay ka gaareen kooxda Watford ayaa reejeneya in loo isticmaalo kulankan madaama kulankii sabtidii la iska garab ciyaarsiiyey
Aguero Iyo Riyad Mahrez.
Daniel Caligiuri oo ka mid ahaa xidigaha ugu muhiimsan kooxda Schalke ayaa kula biiray Alessandro Schopf xidigaha ka dhaawacan kooxda Schalke 04 balse Weston McKennie ayaa qarka u saaran in uu ku soo bilowda garabka midig ee daafaca.
Omar Mascarell ayaa shagi laga gilinayaa kulanka balse waxaa la hubin doonaa xaaladiisa caafimaad ka hor kulanka ka dhici doona Etihad Stadium.
Benjamin Stambouli ayaa soo gali kara booska daafaca dhexe isaga oona taratan la galaya Jeffrey Bruma oo ku soo bilowday kulankii lugtii kowaad oo ka dhacay garoonkooda .
Kulanka: Man City VS Scahlke04 (Champions League )
Goobta :Etihad Stadium.
Garsoorka :Clement Turpin (France)
27-dii xili ciyareed ee la soo dhaafay kooxaha ku soo adkaada 3gool iyo wax ka badan meel aan garoonkooda aheyn tartanka Champions league heerkiisa bug baxa waxa ay u gudbayeen wareega xiga ee tartanka .
Kooxda Man City ayaa badineysay mid kasta oo ka mida sedexdii kulan ee ugu dambeeyey ee ay wajahdo kooxda Schalke 04 tartamada Yurub iyada oo lagu darayo guushii weyneed ee 5-1 oo dhacday fasal ciyareedkii 1969-70.
Manchester City ayaa qasaartay kaliya halk kulan 10-kulan oo ay garoonkeeda ku marti qaaday kooxaha ka socda Germany ( 7-guul iyi 2-bareejo ) kulanka qura ee guul darada waxa ay kala kulantay kooxda Bayeren Munich kulan katirsanaa Champions League waregiisa guruubyada ,ciyaartaas oo dhacday 2013-14 ayaa ku dhamaatay 3-1.
Schalke ayaa badisay hal kulan oo ka mida 9-kii kulan ee ugu dambeyey oo ay ka ciyaartay tartanka Champions League heerkiisa buga baxa ( 1-bareejo iyo 7-qasaaro ) kulanka guusha ay gareen ayaa ahaa kulankii ugu dambeyey oo ay banaan ku soo ciyaraan heerkan oo kale waxa ayna 4-3 uga badiyeen kooxda Real Madrid xili ciyaareedkii 2014-15.
Kooxda Sky Bule lagu naaneeso ayaa qasaareysay labadii kulan ee ugu dambeyey oo ay ku ciyaarto garoonkeeda kulamda bug baxa ee tartanka Champuons league , qasaaraha labada ah waxa ay kala kulantay kooxaha Fc Basel iyo Liverpool oo natiijo isku mida oo 2-1 kaga badinayey.
Safafka maxquulka ah ka hor ciyaarta:
Neymar mise Mbappé xidigee ayay u baahan tahay Real Madrid???... Waxaa ka jawaabaya Florentino Perez